हिजोसम्म अमेरिका बस्छु भन्दा गर्ब हुन्थ्यो, आजबाट बिरक्त मात्रै लाग्छ’ ! – Hamrosandesh.com
हिजोसम्म अमेरिका बस्छु भन्दा गर्ब हुन्थ्यो, आजबाट बिरक्त मात्रै लाग्छ’ !
‘हिजोसम्म अमेरिका बस्छु भन्दा गर्ब हुन्थ्यो, आजबाट बिरक्त मात्रै लाग्छ,” १२ बर्ष देखि अमेरिका बस्दै आएका एक नेपाली बताउँछन् । अमेरिकामा दिन दुई गुणा, रात चौ गुणा कोरोना भाईरसबाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि उनि अतालिएका हुन् । ‘प्राकृतिक प्रकोप, विपति र माहामारीले यो देश धनि, त्यो देश गरिब भन्दोरहेनछ,’ उनि भन्छन । ‘मरिन्छ कि क्या हो १ बरु मरेपनि नेपालमै मर्न पाए हुने भने जस्तो पो लाग्न थालिसक्यो ।’ उनि अमेरिकाको न्युह्याम्प्सोर राज्यमा बस्दै आएका छन् । उनका अनुसार अहिले त्यहाँ रेष्टुरेन्ट, फुड कोर्ट लगायतका धेरै पसलहरु बन्द छन्। कोहि कतै निस्किन छोडेका छन् । हेर्दा बिरक्त लाग्छ ।
‘जतिनै भौतिक बस्तुको पर्याप्तता भएपनि, बाटाघाटा, सडक, सुबिधा र प्रबिधि भएपनि, घर भित्रै थुनिने स्थिति आएपछि, अमेरिका देशमा रहनु र झुपडीमा रहनुमा के चै फरक पर्ने रहेछ रर ?’ उनि उल्टै प्रस्न गर्छन । बलियो मनोबल बनाएर बसेका उनि अहिले भन्छन, ‘म आँफै अतालिएको छु’। उनि भन्छन जतिनै शक्तिशाली देश भएपनि माहामारीको अगाडि ‘बिरालोको अगाडी भिजेको मुसो हुनु सिवाय केहि नहुने रहेछ’ । ‘कर्म गरेर खाने ठाउँमा कर्म गर्न नपाए पछि, के गर्नुर ?’ उनि भन्छन । ‘बाहिरै निक्लिन नपाए पछि के गर्नु ?’ ।
घरि घरि यहि प्रसङ्गमा उनि भन्छन, ‘यत्रो सुबिधा सम्पन्न देशमा त यात्रा मानिस कोरोना संक्रमित देखिए, भाईरसले मरे, के नेपालमा साञ्चै कोरोना नदेखिएको हो त ? कि परिक्षण गर्ने किट राम्रो फेला नपरेको ? अमेरिका जस्तो देशलाई समेत अहिले पर्याप्त सामाग्री उपलब्द गराउन नसक्दा यो हालत भैरहेको छ भने यदि यो महामारी नेपालमा खनियो भने के होला हालत,’ उनि नेपाललाई सम्झेर घरि घरि चिन्तित हुन्छन। अमेरिकामा ट्रंपको नेतृत्वलाई आलोचना गर्दै उनि भन्छन, ‘हामीसंग सन्काई र घमण्डी राष्ट्रपति भएर पनि हो, नभए यसलाई अलिक नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो बेलैमा।’ अहिलेसम्म पनि अमेरिकाले पुरै लकडाउन भने गरिसकेको छैन । सम्बन्धित राज्यको गर्भर्नरले आँफै बुझेर अलि कडिकडाउ गरेको छ । ‘यो ट्रंपले पैसा भन्दा बढि केहि देख्दैन, इकोनोमी डाउन हुन्छ भनेर लक्डाउननै गरिराखेको छैन, यहि ताल हो भने, देश सबै सोतर हुन् बेर लाग्दैन,’ उनि अन्तिममा भन्छन, ‘मलाई त नेपाल आउन पो मन लागेको छ ।’
त्यसैगरी अमेरिकाकै एउटा अस्पतालमा नर्शको काम गर्दै आएकी एक नेपाली महिला भन्छिन, ‘खोई मैले काममा बिदा लिन खोजेको बिदै पाईन। जागिरनै छोडौकि के गरौ भैराखेको छ ।’ उनि भन्छिन ‘बोसले केहि हुँदैन आत्तिनु पर्दैन भन्छ, तर मैसँग काम गर्ने यौटी साथीको श्रीमानमा कोरोना भाईरस देखियो । अहिले उ बिदामा छे । मन आत्तिएको छ, म के गरौँ !’ तर क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका एक नेपाली भन्छन, ‘खोई यहाँ त चहलपहल मान्छेको चलिरहेको छ, बजारमा सामान किन्न मानिसहरु हिडिरहेका छन्, खोई म बुझ्दिन किन त्यसो भैरहेछ, म भने आत्तिएको छु, घरै बसिरहेको छु ।’ तपाईँ हामी पनि यी सबै कुरा सुनेर अघि बढौ है ।